एक चम्चा नुन नै काफी हुन्छ सुन्दर अनुहार बनाउन, जान्नका लागि तल पढ्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
एक चम्चा नुन नै काफी हुन्छ सुन्दर अनुहार बनाउन, जान्नका लागि तल पढ्नुहोस्
प्राय जसो सबै पुरुष होस् वा महिला सबैलाई आफ्नु आनुहर राम्रो र चम्किलो होस् भन्ने हुन्छ । पिम्पल यसले सबै लाई सताई रहेको हुन्छ। कसरि छ त पिमप्ल बाट बच्ने घरेलु उपाय ?
बर्सातको मौसममा अनुहारमा पिम्पल आउनु सामान्य मानिन्छ । तर जसको छाला ओइली हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले हरेक मौसममा पिम्पल आउने समस्यालाई झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
कस्मेटिक उपायबाट केही समयका लागि यसलाई ठीक गर्न त सकिन्छ, तर केही समय पछि पुनः पिम्पल देखिन थाल्छ । यसको अतिरिक्त कस्मेटिक साह्रै महंगा पनि हुन्छन्, र यीनमा मिसाइको रसायनले छालामा नराम्रो असर पनि पार्छ ।
यो एउटा उपायबाट तपाईले क्लीन्जिङ, स्क्रबिङ र मस्चराइजिङको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । जसलाई छालाको पूर्ण देखभाल मानिन्छ । कुनै सिसाको भाँडोमा एक चम्मच नुन राख्नुहोस । त्यसमा सोही मात्रामा मह सिसाएर दुई मिनेटका लागि पर्खनुहोस् ।
त्यसपछि अनुहारलाई सफा पानीले पाखाल्नुहोस् र अनुहारलाई सुक्न दिनुहोस् । त्यसपछि नुन र महको मिश्रण अनुहारमा लगानुहोस् ।
फेरि हातलाई सफा पानीमा हल्का भिजाउनुहोस् । भिजेको हातले अनुहारमा सर्कुलर मोशनमा विस्तारै स्क्रबिङ गर्नुहोस् । कम्तिमा ५ मिनेट स्क्रबिङ गरेर अनुहारलाई नर्मल पानीले धुनुहोस् ।
एक हप्तामा कम्तिमा दुईपटक यस्तो गर्नुहोस् । नुन एक एन्टी ब्याक्टेरियल प्राकृतिक क्लीन्जर हो । यसले गहिराइमा गएर त्वचाको सफाइ गर्छ । र ब्याक्टेरियाको नाश गर्छ ।
यस्तै मह प्राकृतिक मस्चराइजर हो । जसले छालालाई नरम बनाउनुका साथै छालामा निखार पनि ल्याउँछ ।
Topics #आनुहर #नुन #पिम्पल
Don't Miss it ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण यस्तो हुन्छ
Up Next वैवाहिक जीवन खुसि बनाएर राख्नको लागि पिउनु होस् सजिवनको सुप
मुटुलाई स्वाथ्य बनाउने यी ९ तरिका
१. डाइटको ख्याल गर्नुहोस् स्वस्थ डाइटले मुटुको रोग लाग्ने खतरा न्यून हुनुका साथै हृदयघात भएपछि पनि बाँच्ने सम्भावना बढी नै…
फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी, दूध र केरा सँगै खाँदा
केरा र दूध दुवै पोषक तत्वले भरपूर हुन्छन् । प्रायः जसो मानिसले आफ्नो मसल्स बनाउने तयार गरिरहँदा उनलाई केरा र…